Ururka al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii xalay lagu qaaday Xabsiga weyn ee Magaalada Bosaso… – Hagaag.com
Ururka al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii xalay lagu qaaday Xabsiga weyn ee Magaalada Bosaso…
Posted on 5 Maarso 2021 by Admin in National // 0 Comments
Ururka Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii ballaarnaa ee xalay lagu qaaday xabsiga weyn ee Magaalada Bosaso.
Ururka Al Shabaab ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, iyagoona sababta ay u weerareen xabsigaasi ku sheegay in maxaabiista lagu dhibaateeyo.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxey xalay abaarihii shantii saac weerar culus ku qaadeen xabsiga ugu weyn magaalada Boosaaso oo ah xabsi si xad dhaaf ah loogu dhibaateyo laguna tacdiibiyo dadka Muslimiinta.”
“Ciidamada Mujaahidiintu dhawr jiho ayay ka weerareen xabsiga, waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus, ugu dambeyntiina waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta xabsiga ugu weyn Magaalada Boosaaso.”
“Ciidamada Mujaahidiintu markii la wareegeen gacan ku heynta xabsiga waxay gudaha xabsiga ugu tageen maxaabiis fara-badan, oo isugu jira rag iyo haween, waxayna Mujaahidiintu xabsigaas ka sii daayeen guud ahaan maxaabiiistii xabsiga ku xirneed, oo ay tiradoodu tahay afar boqol ruux oo isugu jira Mujaahidiin iyo shacab.”
“Dadka shacabka ah ee xabsiga laga sii daayay ayaa aaday xaafadahooda, iyadoo raggii Mujaahidiinta ee xabsiga ku jirayna ay horey u sii raaceen ciidamada Mujaahidiinta ee dagaalka kula wareegay gacan ku heynta xabsiga ugu weyn Magaalada Boosaaso.”
“Sidoo kale ciidamada Mujaahidiintu waxay gudaha xabsiga ku gubeen laba gaari oo ciidanka maamulka isku magacaabay Puntland, gudaha xabsiga kaga carareen.”